Aprily 16, 2020 ny Facetime Guide Leave a Comment
FaceTime Audio dia tsy mampino fomba ny miresaka amin'ny hafa mpampiasa fitaovana Apple noho ny marin-toerana mazava tsara ny antso. Saingy tsy voatery ny iPhone na iPad. Afaka manao FaceTime Audio miantso amin'ny Apple Watch, ihany koa. Na inona na inona ianao raha mampiasa ny Phone Siri na fampiharana, fametrahana ny antso FaceTime tsotra dia ampy.
1 Ahoana no hanaovana antso amin'ny fampiasana Facetime Siri amin'ny Apple Watch
2 Ahoana no hanaovana antso amin'ny fampiasana Phone Facetime App amin'ny Apple Watch
Ahoana no hanaovana antso amin'ny fampiasana Facetime Siri amin'ny Apple Watch
Say “Hello Siri“, gazety sy ny mihazona ny Digital Crown, na paompy ny Siri Gadget raha toa ianao mampiasa azy io amin'ny Siri Watch face.
State “FaceTime (adiresy ny anaran'i)“.
Ny Apple Watch ankehitriny dia mbola miantso ny fifandraisana mampiasa FaceTime Audio.
Ankafizo ny antso.
Ahoana no hanaovana antso amin'ny fampiasana Phone Facetime App amin'ny Apple Watch
Open ny Phone fampiharana amin'ny Apple Watch.
Paompy teo amin'ny Contact miaraka tokony antso.
Peho ny Phone mariky.
paompy FaceTime Audio.
Vakio ity lahatsoratra ity, izay ahitana vaovao feno momba ny dingan'ny Facetime amin'ny Apple Watch. Araho ny dingana araka ny nomena ny fampiasana Facetime amin'ny Apple Watch mampiasa Siri na Apple App.